Daawo: Hoggaamiyaha Maamulka 'Puntland' Oo Fidiyay Gogol lagu Heshiisiinayo DF-ka iyo Maamul Goboleedyada.
Saldhigga ciidamada Itoobiya ee deegaanka Halgan oo Weerar kala kulmay Al Shabaab.
Yaa Maamulaya deegaanka Kaam Jaroon ee duleedka magaalada Kismaayo?
Monday January 28, 2019 - 21:03:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Saciid Cabdullaahi Deni oo ah hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Puntland ayaa ku dhawaaqay in lasoo gaba gabeeyay kulamo siyaasadeed oo saacadihii lasoo dhaafay dhinacyo is khilaafsan uga socday magaalada Garoowe.
Isagoo shir jaraa'id ku qabanayay Garowe ayuu sheegay in kulamadii dhaxmaray Farmaajo hoggaamiyaha Dowladda Federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada lagu heshiiyay in shir dib u heshiisiineed lagu qabto xarunta gobolka Nugaal.
Wuxuu sheegay in bisha Maarso ee sanadda 2019 magaalada Garoowe ay marti gelin doonto shir lagu dhammeynayo khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Hoos ka daawo shirka Jaraa'id ee Deni uu ku qabtay Boosaaso
Xubin katirsan Sirdoonka Maamulka 'Puntland' oo Boosaaso lagu dilay.
Ciidamada Al Shabaab oo maalintii Sedaxaad maamulaya deegaan katirsan gobolka Sanaag.
Mid kamida Ergadii Xildhibaannada soo xulay oo Afgooye lagu dilay iyo qarax ka dhacay Buula Mareer.
Al Shabaab oo magaalada Gaalkacyo ku dishay Madaxii Nabad Sugidda Gobolka Mudug ee qeybta 'Puntland'.
Guddoomiye Waaxeed lagu dilay gudaha magaalada Kismaayo.